मार्केटिंग विचार: एक क्लिक घटना रेजिष्ट्रेसन | मार्टेक ब्लग
मा मा उत्पादकता परामर्श कम्पनी म चलाउँछु, हामी एक धेरै सार्वजनिक सेमिनार गर्दछौं। हामी मानक घटना मार्केटिंग सामान गर्दछौं: हामीले पायौं माइक्रोसाइट, हामीसँग ईमेल न्यूजलेटर छ, हामीसँग छ अनलाइन दर्ता प्रणाली। तर हामीले एउटा विचार पाएका छौं जुन हामी प्रयास गर्न सोच्दै थियौं, र यो अलि बौलाहा छ। हुनसक्छ तपाई हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि यो राम्रो वा नराम्रो विचार हो: हामी यसलाई "एक क्लिक रेजिष्ट्रेसन" भन्छौं।
यहाँ अवधारणा छ। तपाइँ एक ईमेल न्यूजलेटर को लागी साइन अप गर्नुहोस्, जसले आगामी घटनाको बारेमा जानकारी समावेश गर्दछ। जब तपाईं बटन क्लिक गर्नुहुन्छ, हामी तुरुन्तै तपाइँ साइन अप विचार गर्नुहोस् कार्यक्रम को लागी। तपाईंले फारम भर्नु पर्दैन। हामी ईमेल न्यूजलेटरमा तपाईं को हो भनेर निर्धारण गर्न क्लिक गर्नुहोस् र त्यो क्लिक ट्र्याक गर्न एक अद्वितीय लिंक प्रयोग गर्दछौं। तलको मकअप हेर्नुहोस्:
यो एकदम सीधा देखिन्छ, तर त्यहाँ केही जटिलताहरू छन् जुन हामी सोच्दै थियौं। उदाहरण को लागी:
"तुरून्त दर्ता गरिएको" भनेको के हो?
घटना मार्केटिंग वास्तव मा प्रदर्शन गर्न प्रतिबद्ध व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले बटन क्लिक गर्दा तपाईंलाई वेबपृष्ठमा लग्न सक्छ जहाँ तपाईं आफ्ना बाँकी विवरणहरू थप्न सक्नुहुन्छ। वा यसले तपाईंलाई पहिलो मध्यवर्ती पृष्ठमा लैजान सक्छ जसले हामीलाई सूचित गर्दछ कि तपाईं दर्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी अनुगमन गर्न सक्दछौं यदि तपाईंले वास्तवमै दर्ता प्रक्रियाको बाँकी भाग पूरा गर्नुभएन भने।
विशेष छुट को बारेमा के?
हामी पहिले नै न्यूजलेटर ग्राहकहरूलाई विशेष मूल्य निर्धारण प्रदान गर्दछौं। "मलाई साइन अप गर्नुहोस्" बटनले पनि त्यो छूटलाई दर्ता पृष्ठमा इम्बेड गर्न सक्दछ। त्यो एकदम सफा छ, तर के हामी विशेष सौदाहरुलाई अधिक स्पष्ट र जानबुझो बनाउन चाहन्छौं?
यदि ईमेल कसैलाई पठाइयो भने के हुन्छ?
यो एक ठुलो बिन्दु हो। यदि तपाईं एक साथीलाई ईमेल अग्रेषित गर्नुहुन्छ, र तिनीहरूले "मलाई साइन अप गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्, तिनीहरूले वास्तवमा घटनाको लागि तपाईंलाई साइन अप गर्दैछन्। अवश्य पनि, हामी उनीहरूलाई उनीहरूको नाम "बॉब स्मिथ" हो भनेर पुष्टि गर्न सोध्न सक्दछौं, तर के यसले सामान्य अवस्थामा पनि गाह्रो बनाउँछ?
के हामीले दुबै लाई "मलाई रुचि छ" र "मलाई अब साइन अप गर्नुहोस्" लिंक प्रदान गर्न आवश्यक छ?
हालको ईमेल न्यूजलेटरमा "अतिरिक्त विवरण" लिंक छ, जुन तपाई मूल्य निर्धारण र घटना विवरण हेर्न क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ लिंकमा क्लिक गर्न कुनै खतरा छैन। तर "साइन अप गर्नुहोस्" बटन प्रकारले संकेत गर्दछ कि तपाईं एक प्रतिबद्धता बनाउँदै हुनुहुन्छ। के यो राम्रो वा नराम्रो विचार हो?
त्यसोभए के सोच छ तिम्रो? हामी तपाईंको नयाँ मार्केटिंग विचारमा तपाईंको प्रतिक्रिया मन पराउछौं: के हामीले यो गर्नु पर्छ?
(र यदि तपाइँ यसलाई मन पराउनुहुन्छ भने, आफैं आफैंले यसलाई प्रयास गर्नुहोस् र हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि यो कसरी जान्छ!)
ईमेल मार्केटिंग उन्नत अभ्यास पुस्तिका
मार्क्स 16, 2011 मा 4: 32 PM
मलाई लाग्छ कि बटन क्लिक गर्दा तपाइँको जानकारीको रोजाईको घटना रेजिष्ट्रेसन प्लेटफर्ममा तिनीहरूको जानकारी स्वतः भर्नु पर्छ। त्यस तरिका तपाईं प्रक्रिया अधिक उत्पादक र प्रविष्टि बिन्दु सजिलो बनाउन। तपाईं फर्वार्डिंग व्यक्तिको थप फाइदा प्राप्त गर्नुहुने फारवर्डरबाट उनीहरूको नाम परिवर्तन गर्न सक्षम हुँदै
मार्क्स 16, 2011 मा 5: 58 PM
त्यो मूलतया हामीले सुझाव गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले यस्तो लाग्छ कि हामी एउटै पृष्ठमा छौं। धन्यवाद!
★ साचा ब्रैडी ★
मार्क्स 16, 2011 मा 5: 11 PM
कुनै दुई बटन छैन। एउटा "मलाई साइन अप गर्नुहोस्" बटनले संकेत गर्दछ कि यदि म यसमा क्लिक गर्छु भने म दर्ता हुन्छ (यद्यपि वास्तवमा, मँ पहिले फाराम भर्न अपेक्षा गर्दछु) र "मलाई रुचि छ" बटनले संकेत गर्दछ कि म तपाईलाई चाहन्छु। मलाई यसको बारेमा बढि सम्पर्क गर्नुहोस्, जुन मध्ये कुनै पनि मलाई लाग्नु सही मार्ग हो जस्तो लाग्दछ। "मलाई रुचि छ" बटन "साइन अप" बटन पछि अर्को अप्रासंगिक देखिन्छ।
मलाई साँच्चिकै ईमेलको बटनमा क्लिक गर्ने विचार मनपर्दछ जुन मेरो जानकारीको पृष्ठमा लगिन्छ जुन मैले पहिले नै जनसंख्या सहित छूट मूल्य सहित। हो, म दर्ता पृष्ठमा छूट प्रस्ट पार्ने छु - मलाई थाहा छ कि म सम्झौता गर्दैछु। त्यसोभए मैले गर्नुपर्ने भनेको भुक्तान जानकारी थप्नको लागि दर्ता गर्न सजिलो छ। कार्यक्रममा भाग लिनको लागि एउटा अनुवर्ती अनुस्मारक धेरै बाधा उत्पन्न हुने छैन, तर यदि मैले जान तिर्नु भयो भने म भुल्दिन।
यदि मैले न्यूजलेटर र प्राप्तकर्ता बटन क्लिक गर्दछ, तब उनीहरूले आफ्नै जानकारी बनाउनु पर्छ - ठूलो कुरा होइन। तिनीहरूले अझै आफ्नै भुक्तानी जानकारी प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ कि म चिन्तित छैन कि उनीहरूले मलाई मेरो इच्छाको विरुद्धमा साइन अप गर्दछन्। मेरो प्रश्न तपाइँलाई, त्यसोभए, के तपाईं उनीहरूले न्यूजलेटर प्राप्तकर्ताको जस्तै छूट पाउन चाहानुहुन्छ? किनकी यो प्रणालीले कसरी काम गर्दछ (जब सम्म तपाईंसँग अतिरिक्त प्रोग्रामिंग नभएसम्म एक नामको साथ छुट र लि not्कसँग सम्बन्धित छैन)।
पुन: रेजिष्टर नगरिकन थप विवरणहरू प्राप्त गर्दै, म घटनाको नाम यसको सम्बन्धित वेब पृष्ठमा लिंक गर्न सुझाव दिन्छु। मलाई लाग्छ कि यो अधिक सहज छ मानिसहरूका लागि खोजी गर्नका लागि अधिक नाम प्राप्त गर्न।
मार्क्स 16, 2011 मा 5: 57 PM
ओह, मलाई यो मनपर्‍यो! घटना शीर्षकलाई लिंक बनाउनुहोस् र तत्काल रेजिस्टरको लागि बटन थप्नुहोस्।
(हामी पहिले नै सबै फलो-अप रिमाइन्डरहरू गर्छौं, तर तिनीहरूलाई स्वचालित रूपमा गर्नुको सट्टा हामी वास्तवमै ईमेलहरू हस्तलेखन गर्दछौं र शिष्टाचार कल गर्दछौं। यसले वास्तवमा कसलाई देखाउँछ बढ्दछ।)
मलाई लाग्छ कि यो ठीकै छैन गैर-सदस्यहरूका लागि न्यूजलेटर छुट प्रयोग गर्नका लागि। त्यो अवस्थामा, हामी केवल सुझाव दिन्छौं कि हुनसक्छ तपाई अगाडि बढ्नुहोस् र पहिले नै न्यूजलेटरको लागि साइन अप गर्नु पर्छ। 🙂
मार्क्स 16, 2011 मा 7: 31 PM
मलाई यो विचार मनपर्‍यो। अरूले भनेझैं, मँ पनी सुनिश्चित गर्छु कि त्यहाँ अरु कसैलाई साईन अप गर्न विकल्प छन्, भन्नुहोस् कि यदि एक प्रशासकीय व्यक्ति एक घटनाको लागि आफ्नो / उनको मालिक साइन अप गर्न चाहान्थे। यो समान छ कि अमेजन.कट उनीहरूको एक क्लिक खरीद प्रक्रिया कसरी गर्छ। हुनसक्छ तिनीहरूबाट केहि संकेतहरू लिनुहोस् र त्यसको सट्टामा 'एक-क्लिक साइन-अप' बटन राख्नुहुनेछ?
मार्क्स 16, 2011 मा 8: 35 PM
म घटना मार्केटिंगको धेरै कार्य गर्दछु र तत्काल साइन अपको विचार मन पराउँछु। पछाडि अन्त्यमा म व्यक्तिलाई ड्रिप क्यामेपियनमा नामांकन गर्दछु जुन एक पुष्टिकरण ईमेलको साथ सुरू हुन्छ। त्यस तरीकाले यदि मेरो साथीले मेरो मेल प्रयोग गरी दर्ता गरेको छ, म त्यसलाई पनि पार गर्न सक्दछु।
मार्क्स 19, 2011 मा 8: 15 PM
अति उत्तम विचार, लोरेन!
यो मात्र एक क्लिक क्लिक घटना दर्ता हो, तर यो ड्रिप अभियानको वैकल्पिक मार्ग।
प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद!
नोभेम्बर,, २०१ at 23::2011 बिहान
स्टोर्स रहनुहोस्, प्रमोशनल मर्चेंडाइज आपूर्तिकर्ता, इको-मैत्री उत्पादनहरु को एक श्रृंखला शुरू की है कि पुनर्चक्रित सामग्री को लागी केहि अनौंठो र अद्भुत प्रयोग प्रदर्शन गर्दछ। यदि तपाईंको कम्पनी रमाईलो र नैतिक मार्केटिंग विचारहरूको लागि खोजीरहेको छ भने त्यहाँ जानको लागि धेरै कुरा छ: माउसम्याटहरू र कोसास्टरहरूको रिसाइकल टायरहरू, बाँस पेन, यो-योस र पेन्सिल जसले आफ्ना पुर्खाहरूलाई नम्र पुरानो सीडी केसमा फेला पार्न सक्दछन्। सायद उनीहरूको इको-मैत्री संग्रहमा सबैभन्दा पेचिलो ग्याजेट भनेको ब्याट्री-रहित, पानीबाट संचालित घडी हो जसले यहाँ टीम बीच केही चाखलाग्दो छलफललाई उडायो। एक बुद्धिमान गुच्छा को लागी, यो केहि स्पष्ट देखि चिन्ताजनक स्पष्टीकरणहरु को लागी कसरी यो काम गरीरहेको छ र केहि पनी हामी सार्वजनिक डोमेन मा चाहन्न चाहान्छौं। यदि त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक, कीमेटिस्ट वा भुडु-इष्टहरू छन् जसले यसमा प्रकाश लिन सक्छन, कृपया टिप्पणी गर्नुहोस् र हामीलाई हाम्रो दु: खबाट हटाउनुहोस्।
डिसेम्बर १, २०१ 27 2012:२:7 अपराह्न
विचार मन पराउनुहोस्। इच्छा गर्नुहोस् कि यो पनि ईमेल साइन-अपबाट अलग स्ट्यान्ड-एक्लो उत्पादन हो। म एक घटना चलिरहेको छु। मैले निम्ता गरिरहेको मानिसहरुको सम्पर्क जानकारी पहिल्यै नै छ। म केवल तिनीहरू चाहान्छु कि तिनीहरू "हो" लेबलको ईमेलमा लिंक क्लिक गर्न चाहन्छन् यदि तिनीहरू आउँदैछन् र "होईन" भने तिनीहरू हुन्। सरल लाग्दछ तर मैले अझै यो उपकरण प्रदान गर्ने उपकरण खोज्न सक्छु जसले यो सेवा प्रस्ताव गर्दछ। यदि तपाईलाई एउटाको बारेमा थाहा छ भने, कृपया मलाई थाहा दिनुहोस् किनकि म वर्तमानमा स्मार्ट शिटहरूसँग कुकर्म गर्दै छु एक वर्कअराउन्ड पत्ता लगाउनका लागि।
@ LisaDSparks: disqus के तपाईंले कुनै पनि metup.com जस्तो उत्पादन मा हेर्नुभयो? मँ ईमेलको बारेमा निश्चित छैन, तर साइट पक्कै त्यस्तो सरल छ… केहि सुविधाहरूको साथ तपाईंलाई तपाईंको समुदाय प्रबन्ध गर्न दिनुहोस्।
मीटअप अद्भुत छ, केवल अहिले मैले के गर्दैछु भनेर मात्र होईन। स्मार्ट शीटको साथ जारी रहनेछ र उत्तमको लागि आशा गर्दछ। यो मा ओभरसिंग राख्न सक्दैन। ठूला माछाहरू फ्राउन को लागी, तर यो सेवा को सुविधा को लागी मनपर्छ - र हो म यसको लागि तिर्न तयार छु! धन्यवाद, डगलस। - L
अप्रिल 11, 2015 मा 7: 00 एएम
राम्रो पोस्ट ... यो पोस्ट लेख्न को लागी धन्यवाद ...